Ciidamo ka tirsan DFS oo qarax lala eegtay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaCiidamo ka tirsan DFS oo qarax lala eegtay
Ciidamo ka tirsan DFS oo qarax lala eegtay
Qarax miinada dhulka ayaa saakay lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda fedraalka Soomaaliya, kaas oo dhaliyay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Waxa la sheegyaa in Qaraxa oo ahaa mid Miino ayaa ciidamada Haramcad lagula eegtay wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Balcad,waxaana lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaaro kala duwan.
Dhanka kale dad ku sugnaa goobta uu Qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta qarax culus,islamarkaana ay xigtay rasaas culus oo ay sheegeen in ay rideen ciidamadii qaraxa lagula beegsaday halkaasi.
Waxaa kaloo la sheegayaa in dhowr Askari ay ku dhinteen qaraxa halka tiro kalana ay ku dhaawacmeen,mana jirto faah-fahin intaas dhaafsan oo laga helay qaraxaasi.